Barnaamij la'aan samee kumbiyuutarkaaga - Hoyga Aqoonta
Barnaamij la'aan samee kumbiyuutarkaaga
Waxaa la qoray : [ 16-03-2011 ]
Barnaamij la'aan samee kumbiyuutarkaaga.
Kaalintii 1 aad
Dhammaan dadku way jecelyihiin inuu kumbiyuutarku si fiican u shaqeeyo oo uusan marna xumaan.
adeegsaduhu mar walba wuxuu kala soo degaa barnaamijyo ku habboon samaynta kumbiyuutarka internet-ka kuwaasoo
ku keena (virus) Fayrus inay la socdaan.
Waxaa jira waddooyin badan oo lagu hagaajiyo loogana maarmo barnaamijyada dheeraadka ah taasoo dhibaato ku keeni karta kumbiyuutarkaaga..Aynu bilowno sharraxa.
Marka hore markaad adeegsade tahay mar walba waa inaad haysataa ( Cd ) Window si mar walba aad u adeegsatid.
Hagaajinta Faylasha Nadaamka.( waa markaad faylasha qaarkood weydo ama culays ka dareento )
Geli Cd-ga (windows)-ka
Riix ( Start )
Ku xiji ( Run )
Meesha yar ku qor ( CMD)
Riix markaas (ok)
shaashad madow baa kuu soo baxaysa oo loo yaqaan (Dos)
Ku qor dhammaadkeeda ( CFC/scannow )
ku daa illaa uu ka dhammaynayo,markaana kasoo saar (Cd-ga)
soona shid kumbiyuutarka oo arag faraqa u dhexeeya.
Badanaa markuu kumbiyuutarku shidmayo waxaa laga yaabaa inuu waqti dheer qaato,sababtoo ah waxaa jira barnaamijyada kuugu jira ayaa qaarkood la shidmayaan ( Windows-ka).
Si'aad u joojiso
Shaashadda yar ku qor (MSCONFIG)
Waxaa kuu soo baxaya shaashad weyn ka dalbo
Eeg (Command) hoosteeda hadduu barnaamijkaasi yahay mid
(C:\_Window\_.....) waxna sii raacaan iska daa oo wuxuu khuseeyaa Window-kee.
Hadduuse yahay sidan oo kale (C:\_program Files\_....)
waad joojin kartaa adoo riixaya calaamadda saxda ah ee ka horraysa mid walba.
Markaa wuxuu kaa codsan inaad soo shiddo kumbiyuutarka mar kale si'uu is beddelka u arko.
Si'aad barnaamij kumbiyuutarka si nabada uga tir-tirto.
Aad (Control Panel)
Riix (Add/Remove programs)
markaana ka dalbo barnaamijkaad tuurayso adoo riixaya kuna xiji (Change/Remove)
Shaashad baa kuu soo baxaysa barnaamijkaas khusaysa kuna weydiinaysa inay kaa dhab tahay iyo in kale. Horay u raac illaa aad ka dhammayso.
Ku celinta kumbiyuutarka siduu maalmihii hore ee uu wanaagsanaa ahaa!
(Programs) ama (All program)
hadba kii kuu muuqda.
eeg (System tools)
Markaana (System Restore)
Shaashad baa kuu soo baxaysa badanaa labo illaa saddex ikhtiyaar leh.
dalbo (Restore my computer to an earlier time)
Haddaadse lahayd meel uu u noqdo dalbo (Undo my last Restoration)
Haddii kumbiyuutarkaagu cusub-yahay waxaa wanaagsan inaad hal'abuurtid meel uu mar walba uu u noqdo adoo dalbanaya (Create a restore point)
Marka tan koobaad baynu wadnaaye markaad gooladda/Goobaabinta riixdo ku dhufo
Waxaa kuu soo baxaya meel ay ku muuqanayso Bille ama Kalandar, meeshaas waad ka dooran kartaa bishii / Maalintuu ugu fiicnaa kumbiyuutarkaagu adigoo markaad taariikhahaas markaad u geyso uu (Mouse) Jiirku noqonayo far wax tilmaamaysa. Markaad dalbatid-na riix
Wuxuu ku weydiin maalintaas isagoo qoraya taariikhda iwm.
Ku xiji (Next)
Wuu is deminayaa kumbiyuutarku isna soo shidayaa,markaa wuxuu kuu soo saaraya shaashad sheegaysa howshu meeshay ku dhammaatay sida,inay fushay iyo inaysan fulin.
Badanaa marka kumbiyuutarka muddo dheer lagu shaqeeyo wuxuu dhaliyaa faylal badan oo isku magac ah...
Kaba soo qaad waxaad ku adeegsataan kumbiyuutarka adiga iyo 3 carruurtaada ah ama walaalladaa. Mid walba wuxuu leeyahay howlo uu kumbiyuutarka ka qabto oo uusan kan kale la wadaagin... Markii la furo Barnaamijyada wax lagu qoro sida (Word) iwm oo uu saaxiibkaa ku shaqeeyo waxna ku qoro ayuu wuxuu kaa codsaday inaad hadhow faylkaa furto.
Faylka markaad u soo noqoto oo aad adna wax ku qorto illaa dhowr nuqul (Copy) buu kuu samaynayaa. Marka si faylashaas la'isugu geeyo meel keli ah sidan samee.
(All program) ama (Program)
Shaashad baa kuu soo baxaysa ku weydiinaysa Saxanka aad rabto inaad faylashiisa isu geyso waa hadduu kumbiyuutarkaagu u qaybsan-yahay dhowr qaybood.
Markaa Riix (Defragment)
Markaa marba qayb ku samee isu geynta faylashaas.
Howshani waa mid ku habboon bishii mar inaad samayso waqtina way qaadan.
Faylasha cusleeya kumbiyuutarka iska nadiifi mar walba.
Toddobaad walba waxaa wanaagsan howshan inaad kumbiyuutarka ku samayso.
(All programs) ama (Programs)
Hadba kii kuu muuqda
Shaashad yar baa kuu soo baxaysa ku weydiinaysa sida
oo kale dalbo tan aad rabtid inaad nadiifisid.
markuu xoogaa wado shaashad kale ayaa kugu soo baxaysa kuna weydiinaysa faylasha aad rabto inaad nadiifiso. Dhammaantood dooro haddaad rabto. Markaana su'aal buu kuugu xijin (ok)
Mowduucii hore : Barnaamij la'aan samee kumbiyuutarkaaga -||- Ka soo jeeda: -||- Qoraaga: Rooble
ka qayb galka : 61
Naq Barnaamij la'aan samee kumbiyuutarkaaga
Waxaa la qoray : [ 05-04-2011 ]
WAA BARNAAMIJ AAD U FIICAN WAADNA KU MAHADSANTAHAY
Waxaa la qoray : [ 06-04-2011 ]
Aad baad ugu mahadsantahay.
Waxaa la qoray : [ 30-07-2011 ]
waxaan ku dhibtooday lee halkan ka helee ka waran
duruustiina waa waxa iqoray golah wanan ka faiday mahadsanid Rooble
Soo Laabasho + Barnaamij aan idiin kugu tala galay EnG YaSiN Golaha Barnaamijyada 1 06-11-2016 11:52 PM
Ka tir-tir ama ka masax barnaamij aadan rabin kumbiyuutarkaaga. Halyeyga Afrika Kumbiyuutarka & Internet-ka 12 01-07-2012 03:21 PM
Saacaddu hadda waa 09:34 AM.